प्रधानमन्त्री ओलीको मिर्गौला प्रत्यारोपण तत्काल गरिने –कहाँ पुग्यो तयारी | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more प्रधानमन्त्री ओलीको मिर्गौला प्रत्यारोपण तत्काल गरिने –कहाँ पुग्यो तयारी
प्रधानमन्त्री ओलीको मिर्गौला प्रत्यारोपण तत्काल गरिने –कहाँ पुग्यो तयारी
फागुन ७ गते, २०७६ - १०:५९
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको मिर्गौला प्रत्यारोपण तत्काल गरिने भएको छ ।
आजभन्दा १२ वर्ष अघि पहिलोपटक प्रत्यारोपण गरेको मिर्गौलाले काम गर्न छाडेपछि दोस्रोपटकको प्रत्यारोपण तयारी तिव्र पारिएको हो ।
अन्तिम तयारी स्वरुप मंगलबार साँझ मनमोहन भास्कुलर कार्डियो तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मुटुको एन्जिओग्राफि गरिएको हो ।
मिर्गौला प्रत्यारोपणअघि सबै स्वास्थ्य अवस्था हेरिने र प्रत्यारोपणको समयमा हुनसक्ने ह्दयघात, मस्तिकघात, तथा संक्रमण रोक्न मुटुको अवस्था हेरिने गरिन्छ । उपचारमा संलग्न डा. अरुण सायमीका अनुसार ओलीको मुटु स्वास्थ्य रहेको छ र प्रत्यारोपणका लागी तयार छ ।
हालसम्म केही नबताइएपनि प्रम ओलीको प्रत्यारोपण नेपालमै गर्ने तयारी भईरहेको बताइन्छ । सार्वजनिक रुपमा केही नभनिएपनि बालवाटार स्रोतका अनुसार यो महिनाभित्र उनको मिर्गौला प्रत्यारोपण भईसक्नेछ ।
फागुन ७ गते, २०७६ - १०:५९ मा प्रकाशित
‘फुर्सदिला’ बनेका मन्त्रिहरुलाई थप जिम्मेवारी –कसले के पाए ?
काठमाडौं । कोरोना भाईरसका कारण गत ११ गतेदेखि देश लकडाउन भएपछि ‘फुर्सदिला’ भएका मन्त्रिहरुलाई थप जिम्मेवारी...
महाप्रसाद अधिकारी बने नयाँ गभर्नर
काठमाडौं । आज बसेको सरकारको मन्त्रिपरिषदको बैठकले महाप्रसाद अधिकारीलाई गभर्नरमा नियुक्त गरेको छ...
एकहप्ता लकडाउन थप्ने सरकारको निर्णय
काठमाडौं । आज अपरान्ह बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले आगामी एकहप्ता लकडाउन थप्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले...
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशबासीलाई गरेको सम्बोधन – Live